प्रचण्ड-माधव समूहको आमहडतालमा के-के बन्द हुन्छ, के-के खुल्छ ? – Dullu Khabar
प्रचण्ड-माधव समूहको आमहडतालमा के-के बन्द हुन्छ, के-के खुल्छ ?
२१ माघ २०७७, बुधबार ११:४३
नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहले भोलि आमहडतालको घोषणा गरेको छ । बुधबार पेरिसडाँडामा पत्रकार सम्मेलन गरी नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहले संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिको विरोधमा बिहीबार देशभर आमहडतालको घोषणा गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले देशव्यापी आमहडतालमा स्कुल, यातायात, कलकारखाना, पसललगायत सबै बन्द रहने बताइन् । तर, विद्यार्थीको परीक्षामा नरोकिने उनको भनाइ छ । ‘देशव्यापी आमहडतालमा यातायात, पसल, उद्योग, व्यवसाय, कलकारखना र विद्यालय बन्द हुनेछन् । यसबाहेक अस्पताल, एम्बुलेन्स, पानी, दूधलगायत अत्यावश्यकका सेवाहरू सूचारु हुने छन् । विद्यार्थीहरूको परीक्षा संचालनमा कुनै अवरोध हुने छैन्’ उनले भनिन् ।
उनका अनुसार कामचलाउ सरकारले गरेका संवैधानिक नियुक्तिको विरोधमा बुधबार साँझ देशभर मसाल जुलुस निकालिने छ । ‘आज साँझ देशव्यापी मसाल जुलुसको कार्यक्रम राखिएको छ । यसअघि नै घोषित २८ माघमा काठमाडौंमा हुने विरोधसभा यथावत रहेको छ,’ उनले भनिन् । २२ माघमा काठमाडौंमा आयोजना गरिने युवा र्‍याली २८ माघमा गरिने उनको भनाइ छ ।